နေ့များ: သုဝဏအမြန်ရထား (၅)
တကယ်စီစစ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် အခုမြန်မာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရကို အာဏာရှင်အစိုးရလို့ ယတိပြတ် ခေါ်လို့တော့မရတော့ဘူးပေါ့။ ဒီပုံစံမျိုးကို ယှဉ်ပြိုင်ခံအာဏာပိုင်ဝါဒ (Competitive Authoritarianism) လို့ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်အများစု ကသတ်မှတ်ကြတယ်။ အခေါ်အဝေါ်တွေကတော့သိပ်အရေးမကြီးလှပါဘူးလေ။ အရေးကြီးတာက ဒီအခေါ်အဝေါ်နဲ့ ဒီပုံစံအစိုးရတွေဘယ်လို ပေါ်လာတာလဲဆိုတာပဲ။ Competitive Authoritarianism ဟာ စစ်အေးပြီးသွားလို့ ပေါ်လာတာပါ။
စစ်အေးရဲ့ အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီ တိုက်ပွဲအပြီး ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စုရဲ့ ကွန်မြူနစ်စံနစ်ဟာ အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်တဲ့ အနောက်အုပ်စုရဲ့ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီကိုအရှုံးပေးခဲ့ရတယ်။ ဒီမှာကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒီမိုကရေစီ စံနစ်ကိုပဲလိုက်ကြရဖို့ ဖြစ်လာတယ်။ ဒီမိုကရေစီဟာ တခုတည်းသောစံသဘောသက်ဝင်လာခဲ့တယ်။ အနောက်မှာလည်းကွန်မြူနစ်ကို နှိမ်နှင်းဖို့ မလိုတော့ ဒီမိုကရေစီကို ပိုပြီးပရိုမိုးရှင်းလုပ်လာကြတယ်။ ဇန်းတင်လာကြတယ်။ နောက်တခါ လူတွေပိုကူးသန်း သွားလာနိုင်ကြတယ်။ သတင်းမီဒီယာ အစွမ်းထက်လာတယ်။ အင်တာနက်လိုအဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေပေါ်လာတယ်။ ဒီမှာ မတရားမှုတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဟာ အရင်ခေတ်တွေကလိုဖုံးအုပ်ထားလို့မရတော့ဘူး။ သတင်းတွေဟာ မြန်ပြီး မြင်သာလာတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အာဏာရှင်အစိုးရတွေဟာ အနေအစား မချောင်ကြတော့ဘူး။ အာဏာရှင်တွေဟာ ပြောင်းတော့မယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုသက်သာအောင် ပြောင်းရမလဲလို့ ချိန်လာကြတယ်။
ကျနော်တို့ ပိုမြင်သာအောင် စစ်အေးရှေ့ကို နဲနဲမျှော်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က ၁၉၄၅မှာပြီးတယ်။ နိုင်ငံတွေဟာ စာချုပ်တွေနဲ့ အပျက်အစီးတွေနဲ့ စစ်ပြီးခေတ်ကို ပြန်လည်ထူထောင်လာကြရတယ်။ အနုပညာသည်တွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ ခံစားချက်တွေကို ရိုက်ခတ်ခဲ့တယ်။ ပေါ်လစီသမားတွေ နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ ၆၀ နဲ့ ၇၀ ခုနှစ်တွေမှာ ခေတ်မှီရေး၊ကိုဦးတည်လာတယ်။ နီယို မာ့က်စ်တွေပေါ်လာတယ်။ နိုင်ငံထူထောင်ရေးမှာ အစဉ်အလာ အခံအတိုင်း ရှိတဲ့ သမိုင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကို အခြေခံစဉ်းစားလာကြတယ်။ ၈၀နောက်ပိုင်းရောက်တော့ လက်တင်အမေရိကနဲ့ ဆပ်ဆာဟာရအာဖရိကနိုင်ငံတွေ၊ ပို့စ်ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေမှာ ဒီမိုကရေစီရေးတွေပေါ်လာခဲ့တယ်။ အဓိက ကမ္ဘာ့ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေက အထောက်အပံ့မရတော့လို့ကော ကျောထောက်နောက်ခံမပေးတော့လုိ့ကော အာဏာရှင်တွေဟာ ပြိုကွဲခဲ့ရတယ်။ ဒီပုစ္ဆာမှာ ပထမလှုပ်ခတ်ခါစမသဲကွဲပေမယ့် အနယ်ထိုင်လို့ အချိန်တခုမှာကြည့်လိုက်တော့ ခိုင်မာမှုမရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကိုအဖြေအဖြစ်တွေ့လိုက်ကြရတယ်။ ဒီတော့ ကျနော်တို့နားလည်ထားရမှာက ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အာဏာရှင်တွေကျဆုံးသွားတိုင်းသူ့အလိုလိုဖြစ်လာ ရလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။
ရှေ့က ကျနော်ပြောထားတာနဲ့ ဆက်ကြည့်လိုက်တော့ အဏာရှင်တွေကျဆုံးသွားပေမယ့် အာဏာပိုင်ဝါဒဟာ ပုံစံတမျိုးနဲ့ပြန်လည်လာတယ်။ Competitive Authoritarianism လို့ခေါ်လာကြတယ်။ ဒါမြန်မာတနိုင်ငံတည်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ဆက်စပ်နေတာပါ။ စစ်အေးပြီးလို့ ဘာလင်တံတိုင်းပြိုလို့ ၆နှစ်အတွင်း ၁၉၉၅မှာ ယှဉ်ပြိုင်ခံအာဏာပိုင်ဝါဒဟာ နိုင်ငံ ၃၆နိုင်ငံမှာပေါ်လာတယ်။ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ သူတို့ဒီနိုင်ငံတွေကို ဒေသအလိုက်၊ ယဉ်ကျေးမှုအလိုက်၊ သမိုင်းကြောင်းအလိုက် ခွဲလို့တမျိုး၊ ပေါင်းပြီးတခါပေ့ါဗျာ သူတို့ တွေးကြအဖြေရှာကြတယ်။ တချို့ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပေမယ့် တချို့ဘာလို့ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်မသွားတာလဲစဉ်းစားခန်းဝင်ကြတယ်။
ဒီမှာ ဒီမိုကရေစီကိုသွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ အတွင်းနဲ့အပြင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးလေ့လာကြတယ်။ အဓိကအနေနဲ့ အတွင်းဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (Constitution)၊ Institution (အသင်းအပင်း အဖွဲ့အစည်း) တွေနဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုအခန်း (Leadership) တွေကို ပြန်လေ့လာကြတယ်။ အပြင်ဆိုတာမှာ အနောက်နဲ့နီးစပ်မှု၊ တွန်းအား (West linkage and West leverage) တွေကို ယှဉ်ကြည့်ကြတယ်။
အနောက်နဲ့နီးစပ်မှုဆိုတာက အနောက်နဲ့ စီးပွားဖက်၊ သံတမန်အဆက်အသွယ်၊ နည်းပညာအဆက်အစပ်၊ လူမှုရေး (ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ခရီးသွား)၊ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများဆက်နွယ်မှု တွေကြားက ထိတွေ့မှုတွေကိုဆိုတာပါ။ ဒီနီးစပ်မှုနဲတဲ့အခါ နိုင်ငံတကာနဲ့အဆက်အစပ်ကနဲသွားတယ်။ တိုင်းပြည်တပြည်မှာ နိုင်ငံသားတွေဟာ လူမသိသူမသိ ဖိနှိပ်ခံနေရမယ်။ အစိုးရတရပ်ရဲ့အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေဟာ နိုင်ငံတကာမှာမမြင်သာဘူး။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အင်ဂျီအို၊ ဘဏ် စတာတွေနဲ့ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်ချိတ်မိထားတာဟာ အာဏာပိုင်အစိုးရတရပ် ကိုထင်ရာမလုပ်ရဲအောင်ဖိအားပေးထားတာမျိုးပဲ။ ပြည်သူတွေနိုင်ငံတကာအသိအမြင်တွေပိုရစေတယ်။ နောက်ဆုံးမတော့ အစိုးရထဲကပြန်လည် ပြင်ဆင်ရေးသမားတွေကို စိတ်ဓတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားပေးရာရောက်စေတယ်။
တွန်းအားဆိုတာကတော့ အကူအညီပေးတာတွေရပ်လိုက်တာ၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆုိ့တာ၊ စစ်ရေးအရ၀င်ရောက်အကူအညီ ပေးတာတွေကိုဆိုလိုပါတယ်။ ဒီဖိအားတွေဟာ ဟေတီ၊ပနားမားနဲ့ ဆာဘီးယားမှာ အာဏာရှင်တွေကိုဖြုတ်ချခဲ့တယ်။ ကင်ညာ၊ မာလာဝီနဲ့ နီဂါဂွာရာမှာ အာဏာရှင်တွေဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုဖော်ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်။ အီကွေဒေါ၊ ဂွာတီမာလာနဲ့ ပါရာဂွေးမှာ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုတွေကိုရှောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒိုမီနီကန်ရီပတ်ဘလစ်နဲ့ ယူကရိန်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲမသမာမှုတွေကိုပြန်စီစစ်နိုင်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတကာဖိအားတခုတည်းနဲ့အလုပ်မဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဖိအားပေးခံရတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီရဲ့ အင်အားနဲ့ ခံနိုင်ရည်တွေမှာမူတည်ပြီး ထိရောက်မှုကွာပါတယ်။ ပြီးတော့ အနောက်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံခြားရေး ပေါ်လစီ တွေနဲ့လည်းဆိုင်တာတွေ့ရပါမယ်။ အမေရိကန်က ဆော်ဒီနဲ့ အီဂျစ်ကိုသိပ်မထိချင်ဘူး။ ရုရုားက အာမေးနီးယား၊ ဘီလာရုစ်နဲ့ ယူကရိန်းကိုကာထားတယ်။ ပြင်သစ်ကျတော့ ကင်မရွန်း၊ ဂါဘွန်၊ အိုင်ဗရီကို့စ် ကို သူ့သြဇာအောက်ပဲ ဒီအတိုင်းဆက်ရှိချင်တယ်။ တောင်အာဖရိက က ဇင်ဘာဘွေက နာမည်ကြီး အာဏာရှင် မူဂါဘီကို အကူအညီပေးတယ်။
ကျနော်တို့ဆီမှာ နိုင်ငံတကာ ဆိုကြပါစို့ အနောက်နဲ့ နီးစပ်မှုနဲခဲ့သလို၊ အနောက်ကပေးတဲ့ဖိအားဟာလည်းမှန်မှန်ကန်ကန် မရခဲ့ဘူး။ ဒါ့အပြင် မြန်မာ အာဏာရှင်အစိုးရကိုတရုတ်က ဗီတိုနဲ့ အမြဲစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။ ကောင်းပြီ ဒီတော့ ပြည်တွင်းကို ၀င်ကြည့်ကြမယ်။ မထမဆုံးနိုင်ငံတကာမှာ နိုင်ငံတချို့ရဲ့ ပြည်တွင်းရေးမှာ အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံအင်အားစု တွေကို ယှဉ်ထိုးကြည့်ကြရအောင်။ ဂျော်ဂျီယာမှာ ရဲတွေကို လစာ၃လမပေးနိုင်ဘူး။ သမ္မတရှီဗာနာဇေဟာ အရင် ဆိုဗီယက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် ဆန္ဒပြပွဲကိုဘယ်လိုတားနိုင်တော့မလဲ။ ကာဇက်စတန်မှာ လူငါးသောင်းလောက်ဆန္ဒပြတာ အစိုးရပြုတ်သွားတယ်။ ဟေတီမှာသူပုန်လက်နက်ကိုင်အင်အားက ၂၀၀လောက်ရှိတယ်။ ချီတက်လာပြီဆိုရုံရှိသေးတယ် ရဲတွေကယူနီဖောင်းချွတ်လဲနေကြပြီ။
ဒီလိုအားနဲတဲ့အစိုးရမျိုးရှိသလို ထစ်ကနဲဆို အူကြောင်ကြား လာမလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့ အစိုးရတွေလည်းရှိနေတယ်။ အဇာဘိုင်ဂျန်နဲ့စစ်နိုင်ပြီးခါစ အာမေးနီးယားစစ်တပ်ဟာ ၉၆ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန္ဒပြတဲ့ လူတသိန်းကျော်ကို မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ခဲ့ဘူး။ ဇင်ဘာဘွေမှာ ၂၀၀၀ ရွေးကောက်ပွဲမသမာမှုကို ဆန္ဒပြဖို့ကြိုးစားတဲ့ အစီအစဉ်ကို လှို့ဝှက်ရဲအဖွဲ့က လက်ဦးမှုယူပြီး ရက်ရက်စက်စက်နှိမ်နှင်းခဲ့တယ်။ ၉၈ က မလေးမှာ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် အန်နာအီဘရာဟမ်ကိုဖမ်းတော့ မြင့်တက်လာတဲ့လူထုဒီရေကို ရဲကစံနစ်တကျနဲ့ပြတ်ပြတ်သားသား နှိပ်ကွပ်ခဲ့တယ်။ ဆာဘီးယားမှာ နာမည်ကြီးမီလိုစီဗစ်ဟာ ပြည်သူကို လေးကြိမ်တိတိစစ်တပ်နဲ့ဖြိုခွင်းခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးစီးပွားရေး ကျလွန်းပြီး အုပ်ချုပ်ရေးပါဝါကို ထိန်းမထားနိုင်လွန်းလို့သာပြုတ်ကျသွားခဲ့တာ။
ကဲ ဟန်တင်တန် ပဲကိုးကားရဦးတော့မှာပဲ။ သူတခါပြောခဲ့တာရှိတယ်ဗျ။ အဖွဲ့အစည်းဆိုတာ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုရဲ့ အုတ်မြစ်ပဲ တဲ့။ အဖွဲ့အစည်းမှာ အဓိကလေ့လာစရာ ၂ မျိုးပဲရှိတယ်။ အစိုးရနဲ့ ပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေပဲ။ ယှဉ်ပြိုင်ခံ အာဏာပိုင်အစိုးရ တခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလည်းအလွယ်လေးမှတ်လို့လား။ အတိုက်အခံအင်အားစုကိုအမြဲ လေ့လာနေရတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုထဲ့ထားပြီး ဘယ်သူ့ကိုလှန်ထားရမလဲသိရတယ်။ အတွင်းစည်းထဲမှာလည်းကိုယ့်ကို သစ္စာခံ ဘယ်သူမြဲမလဲတွက်ဆရတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုရှင်းထုတ်ရမလဲ တိကျရတယ်။ တချိန်တည်းမှာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ မီဒီယာ နဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ။ ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲ၊ တရားဥပဒေပြုအဖွဲ့၊ တရားရုံး စတဲ့အဖွဲ့အစည်တွေ အားလုံးကိုကိုယ်သဘောကျလည်ပတ်စေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခုရဲ့ရုပ်ပိုင်းတည်ဆောက်ပုံကို ချိန်ဆရတယ်။ အားကောင်းတဲ့အစိုးရနဲ့ပါတီဟာ အတိုက်အခံတွေရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့စိန်ခေါ်မှု တွေကို ထိမ်းထားနိုင်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက် ထားဖို့လိုပါတယ်။ ယှဉ်ပြိုင်ခံအစိုးရမှာ သူ့ပါတီဟာလည်းအရမ်းအခရာကျလာတယ်။ အာဏာရှင်သက်သက် မဟုတ်လေတော့ ဒီမိုကရက်တစ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိုကျင့်သုံးပြရတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာ အစိုးရကိုအမြဲခက်ခဲစေတယ်။ ကိုယ့်ပါတီအားကောင်းမှမဲဆွယ်တာ၊ မဲဝယ်တာ၊ စည်းရုံးတာ၊ ကမ်းပိန်းလုပ်တာတွေလုပ်နိုင်မယ်။ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ရုံနဲ့မပြီး လွှတ်တော်ထဲလဲလွှမ်းမိုးထားနိုင်ဖို့လိုတယ်။ ဒါမှဥပဒေပြုအဖွဲ့ ကိုကိုင်ထားနိုင်မယ်။ ယှဉ်ပြိုင်ခံအာဏာပိုင်အစိုးရတရပ်ဟာ ပါတီအင်အားတောင့်ဖို့ အင်အားသုံးအနိုင်ယူဖို့၊ ဒါမှမဟုတ် စီးပွားရေးအထိုက်အလျှောက်ပွင့်လန်းလာမှုစတာတွေနဲ့ သူ့အာဏာကိုထိမ်းဖို့ကြုိးစားလေ့ရှိတယ်။
အတိုက်အခံတွေဘက်ကိုကြည့်ရင် သူတို့ရဲ့အားကောင်းမှုဟာာအတိုက်အခံအင်အားစုခြင်းညီညွတ်ဖို့၊ သူတို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ တွေရဲ့လှုပ်ရှားနိုင်ခွင့် ကောင်းဖို့၊ (Political mobilization) ဆန္ဒပြုထုတ်ဖော်ခွင့်တွေရဖို့၊ (Protests) အရပ်ဖွဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်း (Civil Society) တွေအားကောင်းဖို့ ဆိုတာတွေမှာတည်ပါတယ်။ အတိုက်အခံအင်အားစုဟာဒီအချက်တွေရဲ့အားကိုလုံးဝလျှော့မတွက်ထားဖို့လိုပါတယ်။ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ အပေါ်ကအချက်သုံးချက်ကိုပါးနပ်စွာပေါင်းစပ် ပေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။
ခုပြီးခဲ့သမျှ ဒီမိုကရေစီရေးအတွေ့အကြုံတွေကို သေချာပြန်စမ်းစစ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ စစ်ပွဲတွေ ဆန္ဒပြမှုတွေ အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ အာဏာရှင်အစိုးရတွေရဲ့ ဖိနှိပ်မှုအမွေတွေဟာ ယှဉ်ပြိုင်ခံအာဏာပိုင်အစိုးရ တွေဆီကို ရောက်တတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဧရာဝတီလှုပ်ရှားမှုကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ လက်ရှိသမ္မတ ရဲ့ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုလှိုက်လျှောခဲ့တာ၊ အတိုက်အခံနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့လက်ကမ်းခဲ့တာတွေဟာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အားပေးသင့်ကြိုဆိုသင့်တာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံဘေးကပ်နေတဲ့ အင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံကို ထိန်းညှိဖို့ လက်ရှိအစိုးရရဲ့ အမေရိကန်နဲ့နီးစပ်ဖို့ကြိုးစားမှုဟာလည်း အနောက်နီးစပ်မှုနဲ့တွန်းအားကိုသွယ်ဝိုက်အားကောင်းလာစေ မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေး၊ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပါတီတရားဝင်လှုပ်ရှားခွင့်ရရေး၊ ဟာအတိုက်အခံကိုအင်အားဖြည့်တင်းရာရောက်သလို၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကို ဖြေရှင်းတာတွေဟာလည်း မလုပ်မဖြစ်လုပ်ကြရမှာပါ။
တချိန်တည်းမှာ ဒီမိုကရေစီတတိယလှိုင်းစီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ ကြားခံကာလ (transition period) နဲ့ ပေါင်းစည်းကာလ (Consolidation period) ကိုသတိမထားမိသူတွေဟာ ခုစတုထ္ထလှိုင်းလို့တချို့ခေါ်လာကြတဲ့ အာရပ်နွေဦးကို အသေအချာလေ့လာရင် ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေဖြစ်လာဖို့ရှိသေးလည်းဆိုတာမြင်လာမှာပါ။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးလက်ရှိမြင်ကွင်းကျယ်အာရပ်နွေဦးကနေမြန်မာနိုင်ငံရေးလက်တွေ့အနေအထားကိုခင်ဗျားချင့်ချိန် နိုင်ပြီဆို နောက်ထပ် ကမ္ဘာပေါ်လတ်တလောတမြေ့မြေ့လောင်ကျွမ်းနေတဲ့အခြေအနေတခုကို နောက်တပတ်မှာ ချိန်ဆကြည့်ရအောင်။ ကျနော်တို့ဆီဘယ်လိုရိုက်ခတ်မှုရှိလာမလဲဆိုတာ။
Ref. Elections without Democracy; The rise of competitive authoritarianism by Steven Levitsky and Lucan A. Way ။ April 2002
Posted by KZကေ at 23:34
T2A October 10, 2011 at 4:13 PM
ကျေးဇူးပဲဗျာ ။ စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးပဲ။ ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင် နည်းပညာဆိုတဲ့ဒိုင်မင်းရှင်းဟာတော်တော်တာသွားတယ်ထင်တယ်။ အခုဖြစ်နေတဲ့ အာရပ်နွေဦးဆိုရင်သိသလောက် အင်တာနက်ပေါ်ကနေစပြီးလှုံ.ဆော်လိုက်တာမလား။ အဲဒီကစလိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းဟာ Monopoly Effect ဆိုတဲ့သဘောအရ ဆက်ခါဆက်ခါသွားလိုက်တဲ့အသွားဟာ ခုနောက်ဆုံး UNSC မှာ ဆီးရီးယားအရေးကို တင်ပြီးဆုံးဖြတ်ရတဲ့အချိန်တိုင်အောင်ပါပဲ။ အဲဒီ UNSC အစည်းအဝေးဟာ သမိုင်းမှာမကြုံဖူးတဲ့ Double Veto နဲ.ပွဲပြတ်သွားတယ်လေ။ခင်ဗျားလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
T2A October 10, 2011 at 4:16 PM
ကျွန်တော်သိသလောက် အခုနောက်ဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့အယူအဆတစ်ခုကတော့ တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဗျ။ ပြောခဲ့တဲ့ UNSC အစည်းအဝေးဟာ "အာဏာရှင်စနစ်နဲ.ဒီမိုကရေစီ"ရဲ. စစ်အေးတိုက်ပွဲသစ်ပါပဲတဲ့လေ။ သိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း လက်တွေ.နိုင်ငံရေးမှာ အကျိုးစီးပွါးကိုပဲ အဓိကထားကြတာမလား ။ အဲဒီရှုထောင့်ကချဉ်းကပ်နေလို.ပဲ တရုတ်ကြီးနဲ.ရုရှတို.က Veto ထုတ်သုံးခဲ့ကြတာမလား။ တကယ်တော့ ကျင့်ဝတ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မော်စီတုန်းနဲ.လီနင်တို.ရဲ.မျက်ခွက်တွေကို သေးနဲ.ပန်းတာပါပဲဗျာ ။
T2A October 10, 2011 at 4:23 PM
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို.ရဲ.ချစ်ခင်မြတ်နိုးအပ်သောအမိမြေဆိုတဲ့ရွှေပြည်ကြီးရဲ.အရေးကိုတွေးကြည့်ရင် ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ လက်ရှိအစိုးရဟာ သူတို.ရဲ.နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီကို ပြန်ပြီးထိန်းညှိလိမ့်မယ် ၊ ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော့ သူတို.ဟာ တရုတ်ကို အကြီးအကျယ်မှီခိုခဲ့ရတယ်။ တရုတ်နဲ. မကြေငြာတဲ့စစ်ပွဲကို တိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့စစ်သားလူထွက်တွေဟာ သူတို.ရဲ. ခါးသီးတဲ့အတွေ.အကြုံတွေကိုတော့ မေ့နိုင်လိမ့်မယ်မထင်ဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း မြစ်ဆုံဆည်ကိစ္စကနေစပြီးလှန်လိုက်တာပေါ့။ သို.သော် တရုတ်ကိုလည်း သူတို.တအားကြီးတော့ မျက်ကွယ်ပြုမယ်မထင်ဘူးဗျ။ ဘာပဲဖြစ်စေ အနောက်နဲ.တော့ ပိုပြီးနီးစပ်လာအောင်သူတို. ကြိုးစားသွားမယ်လို.ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်။ ဒါကခင်ဗျားပြောတဲ့ အပြင်စည်းဆိုတဲ့ကိစ္စကို ကျွန်တော်ခြုံငုံမိသလောက်ပါ။
T2A October 10, 2011 at 4:28 PM
အဲတပြိုင်တည်းမှာပဲ အတွင်းဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကျတော့ သိတဲ့အတိုင်း အခုဆွေးနွေးပွဲတွေစနေပြီလေ။ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် ဒီတကြိမ်ဆွေးနွေးမှုတွေကတော့ စစ်မှန်လိမ့်မယ်လို.။ မစစ်မှန်ရင်တော့လည်း ခင်ဗျားတို.ကျွန်တော်တို. အတွက်တော့ ရေကြည်ရာမှာ မြက်နုနေကြရဦးမှာပေါ့ဗျာ ။
အခုသိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲ မြစ်ဆုံကိစ္စမှာ တရုတ်ကိုပြန်ပြီးလှန်လိုက်တာဟာ ပြည်သူ.အင်အားကို အစိုးရက အရယူသွားတာပဲဗျ ။ တကယ်တမ်းကျတော့ သူတို.သာခွင့်မပြုရင် ဧရာဝတီကန်ပိန်းလိုမျိုးအခမ်းအနားတွေ ဘယ်သူလုပ်လို.ရမှာလဲဗျာ။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ သူ.ဟာသူ ဘယ်နည်းနဲ.ပဲပြည်သူ.အားကိုယူယူ အဓိကကျတဲ့ အချက်တစ်ချက်ကတော့ ပြည်ပကိုလှန်ချင်လို.ရှိရင် ပြည်တွင်းအားကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားရတဲ့အချက်ပါ။
T2A October 10, 2011 at 4:34 PM
ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ ရွှေပြည်ကြီးရဲ. အပြောင်းအလဲတွေဟာ ဖြည်းဖြည်းနဲ.မှန်မှန်ပဲသွားလိမ့်မယ်ဗျ ။ အဲတပြိုင်တည်းမှာပဲ သူတို.ဟာ ခင်ဗျားပြောတဲ့ Competitive Authorinism ဆိုတဲ့ပုံစံပဲဆက်ပြီးသွားနေဦးမယ်လို. ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့်အမြင်တစ်ခုကို ချပြရရင် အတိုက်အခံတွေဟာ အစိုးရအဖွဲ.ထဲက သဘောထားပျော့ပြောင်းတဲ့ Reformist Minded အင်အားစုတွေကို အားပေးရမယ်ဗျ ။ အရင်တုန်းကလို အစိုးရတစ်ဖွဲ.လုံးကို သိမ်းကြုံးပြီး အပြစ်တွေတင်နေတာမျိုးနဲ.ချဉ်းကပ်နေလို.ကတော့ မိုးကြီးချုပ်သွားလိမ့်မယ်။
T2A October 10, 2011 at 4:38 PM
ကျွန်တော်သာအထဲမှာရှိနေခဲ့ရင် အခုသမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ဆုံးဖြတ်သွားတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်ရေးကို သူ.လက်ထက်မှာ ဆိုင်းငံ့ထားတယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထောက်ခံတဲ့ပွဲတွေ လုပ်မယ်ဗျာ ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် အစိုးရအဖွဲ.ထဲက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားတွေကို အားပေးရာရောက်တယ် ၊ ပြီးတော့ အစိုးရအဖွဲ.ထဲက သဘောထားတင်းမာတဲ့ Hardliners တွေကိုလည်း "ဟာ.......သူတို.ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားတွေရဲ.နောက်မှာ ပြည်သူတွေရှိနေပါလား"ဆိုတဲ့အမြင်ပေါ်သွားနိုင်တယ်။ ပြီးတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားတွေအနေနဲ.လည်း "ဟာ.....ငါတို.ကိုတော့ဖြင့် ပြည်သူတွေက တကယ်အားကိုးယုံကြည်နေပြီ။ ငါတို.နောက်ပြန်ဆုတ်လို.တော့ ပုံမတော်တော့ဘူး"ဆိုတဲ့ Irreversible Process ကိုဦးတည်သွားစေတဲ့ Mind Set မျိုးသူတို.တွေစိတ်ထဲမှာပေါ်သွားနိုင်တယ်ဗျ။
T2A October 10, 2011 at 4:44 PM
ကျွန်တော့်အမြင်ကို ခြုံပြီးပြောရရင်တော့...ကျွန်တော်တို.ရွှေပြည်ကြီးမှာ တော်တော်လေးပျော့ပြောင်းတဲ့ အာဏာရှင်စနစ်သစ်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာမယ် ။ Civil Society တွေပိုပြီးအားကောင်းလာမယ် ၊ စီးပွါးရေးအရလည်း ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့အခင်းအကျင်းတွေပေါ်ထွက်လာမယ်လို. ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပဲဗျာ ။ ခင်ဗျားရေးပေးနေလို.ဒါမျိုးတွေဖတ်ခွင့်ရနေတာဗျ ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်လည်း အခုလို လေပေါခွင့်ရတာပေါ့ဗျာ။ ဆက်ရေးပါဦးဗျ....စောင့်ဖတ်နေမယ်ဗျာ။